indrindra amin’ireo entana lany daty ireo kanefa mbola haranty ny vidiny mora mba hisarihana ireo mpiantsena. Efa misy kosa ny fametrahana rindrandamina, indrindra rehefa andro fety amin’ny fidiran’ny entana satria ny fanjifana dia miakatra bebe kokoa eny amin’ny tsena, hoy ny minisiteran’ny indostria sy ny mpivarotra ary ny asa tanana. Efa misy ny « task force » manara-maso ny fandrindrana ireo entana lany daty ary efa nanomboka tamin’ny volana janoary lasa teo ny ezaka. Hita tamin’izany ireo entana nodorana sy nosamborina. Manentana ny mpanjifa hatrany ny minisitra mba hanatona ireo « bureaux de doléances » eny amin’ny minisitera raha mahita tranga mampahiahy. Ny fiaraha-mientan’ny minisitera, ny mpanjifa ary ny mpandraharaha no hahafahana misoroka ireo entana lany andro eny an-tsena. Ho an’ireo mpivarotra kosa dia tsy maintsy arahi-maso ihany koa ireo daty sy fe-potoana azo hampiasana ireo entana amidy. Mila mailo ny mpividy hanamarina ny daty miraikitra amin’ireny entana ireny, indrindra ny sakafo.